ZVAMUNGADE KUZIVA MAEREANO NE AMP
CHIDZIDZO CHE AMP NDECHEYIKO?
Mavara anoti AMP akamirira kuti Antibody Mediated Prevention. Idzi ipfungwa dzekupa vanhu masoja ekudzivirira chirwere nekuti tione kuti tingakwanise here kuzivirira Mukondombera.
Chidzidzo che AMP inzira itsva yekudzivirira Mukondombera yakafanana nezvidzidzo zvemazuva ese zvekubaya nhomba yekudzivirira Mukondombera. Muzvidzidzo zvemazuva ese zvekubaya nhomba, vanhu vano baiwa uye vaongorori vanomira kuona kuti miri yavo inokwanisa here kugadzira masoja ekudzivirira chirwere anoriwsa Mukondombera. Muchidzidzo ichi, tinodarika nhanho iyi, uye tinobva tagadzira nzira yekuvapa masoja ekudzivirira chirwere mumuviri. Tinoshandisa nzira yekubaya zvinowedzerwa, vamwe vanhu vanoshandisa izwi rekuti IV kana kubaiwa diripu. Ichi chidzidzo chekutanga kuongorora kuti masoja ekudzivirira chirwere anokwanisa here kudzivirira Mukondombera.
CHIIKO CHINONZI MASOJA EKUDZIVIRIRA CHIRWERE?
Masoja ekudzivirira chirwere akasikwa uye akagadzirwa nemapurotini anoita basa rekurwisana nezvirwere mumuviri. Masoja aya anokwanisa kunamatira kunze kwehutachiwana achivhara kuti husakonzere chirwere mumuviri. Izvi zvinonzi “kutonhodza.” Izvi ndizvo zvinokonzera kuti masoja, anoshanda kudzivirira vanhu vasabatwe nechirwere. Masoja ekudzivirra chirwere aya, anopihwa zita rekuti VRC01, anebasa rekutonhodza masoja anokonzera Mukondombera. Zvakaongororwa muLebhuzvakaratidza kuti masoja ekudzivirira chirwere anotonhodza akaita se VRC01 anokwanisa kudzivirira zvirwere zvakasiyana zvendudzi dzakasiyana dzeMukondombera unowanikwa munyika dzakasiyana. Anoita izvi nekunamatira panzvimbo dzinoshandiswa nehutachiwana kana huchibatana nenhengo dzisina chirwere, uye kurwisa chirwere. Chidzidzo che AMP chichabatsira kuona kuti masoja ekurwisa chirwere anonzi VRC01 achakwanisa here kudzivira Mukondombera muvanhu.
NDIUDZEIWO ZVIMWE MAERERANO NE KUBAIWA IV KANA DIRIPU.
IV kana diripu kasaga kakazara mvura inesauti, sauti yatinoshandisa kurapa kana munhu apera mvura mumuviri. Masoja ekudzirira chirwere anonzi VRC01 anosanganiswa nemvura iyi nachiremba wemishonga. Huwando hwemasoja ekudzivirira chirwere anosanganiswa nemvura yesauti iyi anoendarana nehuremo hwemunhu, saka munhu anorema chaizvo achawana masoja ekudzivirira chirwere mazhinhji. Munhu anobaiwa kaviri kuona kuti masoja ekudzivirira chirwere anoshanda here kudzivirira Mukondombera: kubaiwa zvinokwana 10 mg/kg, uye kubaiwa zvinokwana 30 mg/kg. Vamwe vachawana mushonga we placebo, uyu mushonga imvura inesauti chete isina kuiswa masoja ekudzivirira chirwere. IV kana diripu inobaiwa kumunhu akapinda muchidzidzo ichi kwenguva inoita maminitsi makumi matatu kusvika makumi matanhatu. Kubaiwa IV, katsono kasina kumboshandiswa kakabaiwa mukachubu ke pulastiki kagobaiwa mustinga yeparuwoko. Kasaga kakazara mvura kanoturikwa pakatanda kakareba kane kapombi, kanoita kuti mvura ibude zvishoma-shoma ichipinda mumuviri nepatsinga yeparuwoko.
NDIANIKO ARIKUITA CHIDZIDZO ICHI?
Chidzidzo ichi chirikuitwa nemasangano maviri, sangano reHIV Vaccine Trials Network uye nesangano reHIV Prevention Trials Network. Masangano maviri aya nemakirinika arimuchidzidzo ichi anoshanda pamwechete nevatungamiri varimumatunhu kuitira kutira vagari vematunhu iwayo vagamuchire zvechidzidzo ichi uye zvisakanganise tsika nemagariro evanhu.
Munhu akapinda muchidzidzo achibaiwa IV
AMP Animation #1 - Shona
AMP Animation #2 - Shona
AMP Animation #3 - Shona
AMP Animation #4 - Shona